Firaketana anaty lisitra ireo firaketana an-dalambe firenena, tanàna, kaodim-paositra / kaody zip SQL, endrika fisie Excel.
Paositra sy Lalana
Listreet dia manome anao vahaolana tonga lafatra ho an'ny angon-drakitra, kaody paositra ary kaody an-dalambe. Ny angon-drakitray dia fitahirizan'ny vaovao naoty ambony indrindra, voaangona tsara mba hanomezana anao sy ny orinasanao ny traikefa tsara indrindra.
Raha ny momba ny kaody zip/kaody paositra, dia nahavita nametraka firaketana tsy manam-paharoa sy tsy manam-paharoa izay tsy misy dikany izahay. Ny drafitray dia natao hifanaraka amin'ny filanao ary hanolotra anao lisitra angona tsotra sy marina ho an'ny kaody paositra / postcodes, tanàna, faritra / faritra ary anaran'ny arabe. Ny angon-drakitray dia natsangana avy amin'ny loharanom-pahefana iray hanampy anao amin'ny fidirana amin'ny fampahalalana mifandraika sy manara-penitra. Ny serivisyy dia manome anao fahafahana miditra amin'ny arabe, tanàna, na kaody paositra amin'ny toerana rehetra manerana izao tontolo izao.
Toerana & Fizarana administratif
Kaody ZIP, kaody paositra, arabe
Faritra ora, DST, Fisondrotana & bebe kokoa...
Firenena + faritany
Eoropa Andrefana Afeno
Eoropa Atsinanana Asehoy ny
Amerika Avaratra Asehoy ny
Azia Asehoy ny
Atsimo & Amerika Afovoany Asehoy
Afovoany Atsinanana Asehoy ny
Afrika Asehoy ny
Rep. Afrikana Afovoany
Oseania Asehoy ny
antsika Etazonia EN Alabama Autauga Autaugaville 36003 32.636003 -32.636003 104
antsika Etazonia EN Alabama Autauga Billingsley 36006 32.636003 -32.636003 111
antsika Etazonia EN Alabama Autauga trano heva 36008 32.636003 -32.636003 83
antsika Etazonia EN Alabama Autauga Autaugaville 36003
antsika Etazonia EN Alabama Autauga Billingsley 36006
antsika Etazonia EN Alabama Autauga trano heva 36008
antsika Etazonia EN Alabama Autauga Autaugaville
antsika Etazonia EN Alabama Autauga Billingsley
antsika Etazonia EN Alabama Autauga trano heva
Ampitomboy ny fitaomanao anio!
Raha te hividy ny angonao ianao dia kitiho ny bokotra "Buy" . Ampio ny sarety ilainao rehetra, dia tohizo amin'ny fividianana.
Rehefa fenoinao ny antsipirian'ny fandoavana ary voila dia tsara ny mandeha! Ny fandoavam-bola dia azo avoaka amin'ny alàlan'ny PayPal, carte de crédit, na Bitcoins.
Rehefa vita soa aman-tsara ny fandoavam-bola dia alefa ho azy any amin'ny mailakao ny rakitra iray. Ity rakitra ity dia azo alaina amin'ny endrika Excel na endrika tianao.
Fampidirana mora amin'ny CRM anao
Manatsotra sy manome ny fampahalalana rehetra amin'ny endrika GIS sy CSV (rakitra) izahay. Ireo rakitra ireo dia azo ampidirina mora amin'ny sehatra/rindrambaiko na angona.
Misy fanazavana momba ny fampianarana momba ny rafitra mahazatra indrindra miaraka amin'ny antontan-taratasy PDF izay nosoratana be dia be mba hanomezana anao ny fitarihana ilaina. Ampiasao tsara ny safidin'ny chat na mailaka momba an'io hifandraisana amin'ny ekipanay manampahaizana.
Torohevitra tonga lafatra hanohanana ny fitomboan'ny orinasanao
Ny matihaninanay dia nanome rafitra data (lisitra) mandrakotra ny firenena rehetra, ny toerana, ny tanàna, ny arabe, ny fizarana ara-pitantanana, ny statistika, ny kaody ZIP/Paostaly, ny kaody fanondroana, ny haavony ary ny faritry ny ora. Ny fampahafantaranay rehetra dia natao ho georeference ary idirana amin'ny fiteny eo an-toerana, amin'ny teny anglisy nadika, ary dikan-teny ASCII tsy misy accent.
Toeram-pikarohana manokana &
Adiresy Conversion Tools
Azonao atao izao ny manondro ny toerana misy anao GPS (latitude sy longitude) amin'ny adiresy na toerana mora vakiana. Ny angon-drakitra geocoded anay dia hanome ny orinasanao ny fotoana mety amin'ny fitomboana, amin'ity taona ity sy any aoriana. Mifandraisa aminay anio.
Fanamarinana endrika sy CRM
Azonao atao ny mampiasa ny angonay mba hanamafisana adiresy, fidirana amin'ny forum toy ny lisitry ny lalana. Izany dia manampy anao hampihena ny filana fisavana tanana. Ny angon-drakitray dia manome anao ny tombontsoa hifehy sy hanome alalana ny endrika angon-drakitra rehetra nampidirina tao amin'ny forum. Azonao atao koa ny mampiasa azy io mba hamenoana ny fampahalalana an-dalambe izay tsy hita.
Data & Bebe kokoa…
Ny tatitra rehetra azo dia azo antoka 100% ary sarobidy.
Manome anao antontan'isa mahasoa sy lisitry ny sarintany an-dalambe amin'ny antsipiriany izay hanompo anao sy ny orinasanao.
Raha te hahazo fomba fijery hafa momba ny varotra ianao dia diniho ny fampiasana ny lisitray.
Raha manana fampahalalana momba ny varotra ny marika / orinasanao dia azo ampiasaina handinihana ny firenena na faritra ny angonay.
Azonao ampiasaina ihany koa ho an'ny tanjona fanamarinana.
Manolotra safidy fahazoan-dàlana samihafa ho an'ny mpanjifanay rehetra izahay mba hifanaraka amin'ny filany manokana sy ny filan'ny orinasa. Azonao atao ny misafidy avy amin'ny Basicy, ny orinasanay, na ny licence amin'ny orinasanay.
Data manokana & tolotra
Eto ny Listreet hanome serivisy premium izay natao hanatsarana ny kalitaon'ny angonao. Afaka miditra amin'ny fampahalalana momba ny kalitao sy ny antsipiriany ao anatin'ny adiny iray latsaka ianao amin'ny alàlan'ny tsindry vitsivitsy. Vonona ny hiasa amin'ny endrika fanodinana data rehetra ny matihaninanay ary hiverina aminao miaraka amin'ny vokatra tsara indrindra. Ity dia mety ho kaody paositra, faritra, olona, fampahalalana ara-bola, na toerana. Na inona na inona izany, vonona izahay hanampy anao amin'ny fomba tsara indrindra.
Ny angon-drakitray dia azo ampiasaina hanamarinana sy hanitsiana ny lesoka amin'ny tsipelina, hampihenana ny fandaniana azo avy amin'ny fanitsiana amin'ny tanana. Eny, feno tanteraka ny fikarakarana asa toy izany! Azo ampiasaina koa ny angon-drakitra rehefa manamarina ny kaody paositra, ny anaran'ny arabe ary ny adiresy.
Ny Zip Code dia natao hanombanana ny elanelana misy eo amin'ny teboka amin'ny tsipika mahitsy na amin'ny lalana. Izany dia mahatonga azy io ho fitaovana tonga lafatra ho an'ireo izay te-hanara-maso ny fiarany na mikasa ny lalana fanaterana.
Assimilation tsy misy ezaka amin'ny Rafitra fitantanana DB:
Azonao atao ny manondrana mora foana ny angona PostCode amin'ny alàlan'ny endrika tokana. Ity dia mety haka endrika CSV sy GIS ary azo afindra mora amin'ny rafitra fitantanana rindrambaiko. Mba hahazoana traikefa feno momba ny zavatra tsapany, mifandraisa amin'ny ekipa mpanohana anay.
Raha mila fanontaniana sy fanohanana fanampiny, aza misalasala mifandray aminay, faly izahay mandre avy aminao. Antsoy +1 (646) 930-9200